Raysul Wasaaraha Xukuumadda Itoobiya Abiy Axmed Cali ayaa 72-saac (Saddex Cishe) oo dheeraad ah markale u qabtay in ay isu dhiibaan Xooggaga Tigray oo dagaal iska caabbin ah la galay Ciidanka Federaalka.
Abiy ayaa sheegay in waqtigaas wixii ka dambeeya Dowladda Federaalka ay qaadeyso tallaabadii ugu dambeysay ee lagu soo afjarayo dagaalka oo daba-dheeraaday sida uu hadalka u dhigay.
Haddaba waa maxay sababta Abiy Ahmed uu markale waqti ugu qabtay hoggaanka TPLF?
Jawaabta ugu fudud ee su’aashaan ay ka bixiyeen qaar kamid ah Siyaasiyiinta Itoobiya iyo Shaqsiyaadka sida gaarka ah ula socda Xaaladda dalkaas waa in uu muujinayo awoodda maalmihii koobnaa uu ugu gacan maroojiyay Tigray magaalooyin muhiim u ah.
Sidoo kale, waxa uu ka caga jiidayaa in uu sii daba-dheeraan dagaalka oo uu hadda u galay sabab la xiriirta in uu huri waayay tallaabo militari oo lagu awood wiiqo isbaheysiga awoodda isbiday ee Tigray.
Itoobiya waxaa ka barakacay Kumanaan ruux, halka ay dhinteen boqolaal, waxaana dhaawacmay boqolaal kale sida ay tebiyeen qaar kamid ah Hay’ada kala duwan, balse sheegay in ay adag tahay helitaanka macluumaad dhameystiran sabab la xiriirta Isgaarsiinta & internetka Gobolka oo Dowladda Federaalka jartay.
Isu dayo kala duwan ayaa socda, Ururo, Waddamo & shaqsiyaad kale oo daneynaya xasiloonida Itoobiya ayaa soo jeediyay in hubka la dhigo, loona weecdo dhanka wada-hadalka six al loo gaaro.
Haddaba, hoggaanka Ismaamulka Tigray miyay isu dhiibi doonaan Dowladda Federaalka, mise dagaalka ayay sii wadi doonaan?